UMoeketsi: iRoyal AM ayiziphuphi iphindela 'ehlathini' iya kwiPremiership
UMoeketsi: iRoyal AM ayiziphuphi iphindela ‘ehlathini’ iya kwiPremiership
August 3, 2021 August 3, 2021 Impempe.com
Umqeqeshi weRoyal AM, uSerame Moeketsi akakalilahli ithemba lokuthi iqembu lakhe lizodlala kwiDStv Premiership ngesizini ezayo.
Lokhu kuhlaluke ngesikhathi ekhuluma esithangamini nabezindaba kwethulwa ngokusemthethweni iKZN Premier’s Cup ka-2021, eMoses Mabhida Stadium, ngoLwesibili.
UMoeketsi ubengalivezi nakancane izinyo ngesikhathi ethi: “Ngisazibona njengomqeqeshi ongumpetha ngoba iligi ngiyiwinile kahle nje, ngaphandle kokwenzelelwa.”
IRoyal AM igcine ifake icala ngemuva kokukhushulwa kweSekhukhune United esizodlala kwiPremiership. Asikaphumi isinqumo secala elidlulisiwe kodwa uhla lwemidlalo lukhomba ukuthi iRoyal AM izodlala kwiGladAfrica Championship ngesizini ezayo,
ISekhukhune yona izobe igijima kwiPremiership. UMoeketsi uthe akafuni ukukhuluma kakhulu ngecala ngoba lisenkantolo, ngakho akumele aye kude kakhulu uma kukhulunywa ngalo.
“Ngeke ngikwazi ukusho lutho mayelana necala,” kusho yena. Nokho ukungafuni ukugxila kakhulu kulolu daba bekubuye kumhlule yena uMoeketsi njengoba ebuye waluthinta.
“Siyethemba futhi yathathandaza ukuthi kuzothathwa isinqumo okuyisona nesiqondile, bese sikwazi ukuthola indawo yethu esifanele kwiPremiership.”
UMoeketsi uthe wethemba ukuthi bazodlala kahle kwiPremier’s Cup ngoba vele bebelokhu bendawonye bezilolonga.
“Sikwazile ukuthola abosizo lwengqondo ukusisiza ngabafana. Siligcine ndawonye iningi labadlali bethu, asizange sidedele abadlali.
“Besilokhu siya emakhempini nabafana sibakhuthaza, futhi asizange size siqale sicabange ngokuvala. Besilokhu senza izinto eziningi ukubagcina bendawonye,” kusho uMoeketsi.
Ngaphandle kwalokhu uveze ukuthi kukhona abadlali abathathu ababasayinisile abanamagama ahlonishwayo, abebedlala kwiPremiership.
Nokho uthe ngeke awaveze amagama abo okwamanje kodwa bazobe bekhona emidlalweni yePremier’s Cup ngempelasonto.
Imidlalo yePremier’s Cup izodlalwa ngoMgqibelo nangeSonto, eChatsworth Stadium, eThekwini. Kuzoqala eyokuhlunga lapho kuzotholana khona Uthongathi FC neMaritzburg United, ngoMgqibelo ngo-11 ekuseni.
FUNDA NALA: Isiyamcika umqeqeshi weSuperSport eyemibiko eyamanisa abadlali bakhe neChiefs
Emdlalweni wesibili wokuhlunga kuzotholana phezulu iRichards Bay FC neRoyal AM ngo-3 ntambama. Abazowina lapho yibona abazodlala owandulela owamanqamu.
Komunye umdlalo owandulela owamanqamu kuzobhekana AmaZulu FC neLamontville Golden Arrows. La maqembu ngeke ayidlale eyokuhlunga ngoba kubhekelelwa ukuthi azodlala kwiMTN 8 ngempelasonto ka-Agasti 14-15.
Wonke amaqembu azodlala kwiPrmier’s Cup azothola u-R585 000 ngalinye, hhayi ukuthi azobe ebanga lesi samba.
Previous Previous post: UTembo isimume entanyeni eyokumataniswa kwabadlali bakhe neChiefs
Next Next post: USekgota akafuni ukudidiswa yinjabulo ngomdlalo wokuqala kwiChiefs